Waxsoosaarka iyo Warshad Sinjibiisha Organic | Nongchuanggang
Qeexitaanka sheyga sinjibiil ee dabiici ah: waxaa jira afar ilaa shan jeer jeeriga badan oo isbarbardhigaya sinjibiisha dabiiciga ah iyo sinjibiillada caadiga ah, inta ay u egtahay mid jilicsan, waxay dhadhamisaa aad u basbaas. Waxaa intaa dheer, sinjibiil dabiici ah ayaa ku yar fiber, sidaa darteed waxay ka dhadhan fiican yihiin kana jilicsan yihiin sinjibiilka caadiga ah.
Cunista xoogaa sinjibiil ah maalin kulul waxay jidhka bini'aadamka u heli kartaa xaalad wanaagsan oo reyn reyn, dhidid, qaboojin iyo qabow ah. Waxqabadka guud ee kuleylka, sida dawakhaad, wadna garaac, laab xanuun, lallabbo iyo xaaladaha kale ee bukaanka, waa caawimaad weyn in la cabbo maraq sinjibiil / biyo ah. Rendan, oo ah daawo dhaqameed Shiine ah oo looga hortago kuleylka, wuxuu ka kooban sinjibiil, kaas oo loo isticmaalo xoojinta caloosha, maskaxda lagu qaboojiyo laguna cusbooneysiiyo.
Daraasado cilmiyaysan ayaa lagu ogaaday in sinjibiil dabiici ah uu u shaqeyn karo sidii antibiyootikada qaarkood, gaar ahaan salmonella. Markaad la il darantahay heerkulka kulul, cuntadu waxay u nugushahay faddaraynta bakteeriyada, iyo koritaanka iyo taranka si dhakhso ah, oo fududahay in la keeno calool xanuun daran, cunitaanka sinjibiisha qaar waxay ka caawin kartaa ka hortagga iyo doorka xakameynta.
Cunista sinjibiisha dabiiciga ahi waxay leedahay saamaynta ka hortagga lallabada iyo joojinta matagga. Haddii ay jirto "isku-hagaajin la'aan" dhaqdhaqaaq oo ay sababaan cayaaraha qaarkood, cunista sinjibiil waxay ka dhigi kartaa mid fududeysa. Daraasaduhu waxay cadeeyeen in budada sinjibiil ee dhaqdhaqaaqa ay keento madax xanuun, dawakhaad, lallabbo, matag iyo astaamo kale oo ah heerka waxtarka leh ee 90%, iyo waxtarka in ka badan 4 saacadood. Dadku waxay u isticmaalaan inay cunaan sinjibiil si looga hortago baabuur-xumada, badda, ama ul Neiguan acupoint, waxay leedahay saameyn muuqata, sidaas darteed waxay leedahay sumcad "matagida daawada guriga".
Kala duwanaansho Sanjabiil Yar
Miisaanka (kg) 80g 100g 150g 200g 250g
Lambarka Moodalka 100g-300g
Magaca badeecada Iibinta Sinjibiil Organic Organic cusub ee Shiinaha
Cabir 100g / 150g / 200g / 250g / 300g
Dalagyada Dalaggii Ugu Cusbaa
Xirmo Kartoonka caaga ah
Xirxirida 20kg / bac, 10kg / ctn
Faahfaahinta Baakadaha 100g iyo ilaa 10kg / boorso, 20kg / bac, 10kg / ctn
150g iyo ilaa 10kg / boorso, 20kg / bac, 10kg / ctn
200g iyo 10kg / ctn, 10kg / gaisu sanduuq, 30lbs / sanduuq caag ah
250g iyo ilaa 10kg / ctn, 10kg / gaisu sanduuq, 30lbs / sanduuq caag ah
Hore: Budada sinjibiil
Xiga: Toonta madow